သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ – Askstyle
ဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။
အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတေက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲနော် …. ။
ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြသာနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ် …. ။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပူခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် …. ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက ဒီဝေဒနာကို ပိုမိုဆိုးရွှားစေနိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို ဆယ်မိနစ်ခန့်လောက် စောင်းအိပ်လိုက်ရုံနဲ့တင် ရင်ပူခြင်းမှ သက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက အစာခြေစနစ်ကိုပါ ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေ များစွာရရှိစေနိုင်တဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းကို ညတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ……. ။
လူတွေအတွက် အိပ်စက်တာက အရေးပါတဲ့ အားသွင်းမှုဖြစ်တယ်။ သင်အိပ်တဲ့ အနေအထားက သင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ လတ်တလောလေ့လာမှုအရ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာကြောင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအများစုရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြန်ရည်ကြောစနစ်ဟာ ကိုယ်တွင်းစနစ်ကနေ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ စွန့်ထုတ်တဲ့ နည်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလုပ်ပါတယ်။ ပြန်ရည်ကြောစနစ်ထဲက အကြီးဆုံး သွေးကြောက ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် စွန့် ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ရည်ကြောစနစ်က အဆီ၊ ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ တစ်သျှူးထဲက တခြားအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာအရေးပါပြီး ဆဲလ်တွေထဲကို အာဟာရဓာတ်တွေ မြန်မြန်ရောက်ရှိစေပါတယ်။
– သရက်ရွက်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါတယ်
သရက်ရွက်ဟာ ပြန်ရည်ကြောစနစ်ထဲကအကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်ဘက် အခြမ်းမှာရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်း အိပ်တဲ့အခါ သရက်ရွက်က ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သရက်ရွက်ထဲသွေးစီး ဆင်းမှုအားကောင်းစေပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန် စွန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ကောင်းကောင်း စွန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ အူသိမ်နဲ့အူမကြီးကြားဆက်တဲ့နေရာ (Ileocecal valve)ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တဲ့အခါ ကမ္ဘာမြေဆွဲအားကြောင့် အူသိမ်ကနေ အူမကြီးဆီကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ အလွယ် တကူထွက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါ အူမကြီးကနေ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မြန်စွန့်ထုတ်နိုင်စေပါတယ်။
– ညဘက်ရင်ပူဝေဒနာ လျော့ပါးစေပါတယ်
မကြာခဏ ရင်ပူဝေဒနာ ခံစားနေရရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ပေးပါ။ အဲဒီအခြေအနေမှာ သင့်အစာအိမ်ကနေ အစာရေမျိုပြွန်ဆီ အစာတွေဆန် တက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– အသည်း ၀န်ပိမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်
အသည်းက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတာကြောင့် ညာဘက်စောင်းအိပ်ရင် အသည်းပေါ် ၀န်ပိစေပါတယ်။ ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ရင် အသည်း ဆီကို အဆိပ်အတောက်နဲ့ တခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတ် တွေမရောက်ရှိစေပါဘူး။
– နှလုံးကို ကျန်းမာစေပါတယ်
နှလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းဟာ အဆုတ်ကနေ သွေးတွေ လက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာက နှလုံးကို ပိုပြီး အလွယ်တကူ လုပ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ရင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးကျန်းမာစေပါတယ်။
ဘာကွောငျ့ ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သငျရဲ့အိပျစကျပုံဟာ သငျရဲ့စိတျနဲ့ကိုယျ ကနျြးမာရေးအတှကျ အရမျးကိုအရေးတကွီး ပတျသတျနလေို့ပါပဲ။
အကယျ၍ သငျအနနေဲ့ ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျလမေ့ရှိရငျတော့ အခုဖျောပွသှားမယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို အဆုံးထိဖတျကွညျ့ရငျး ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျဖို့ သငျကွိုးစားလာပါလိမျ့မယျ။ခန်ဓာကိုယျကို ဘယျဘကျသို့စောငျးအိပျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတကျေတှနေဲ့ မလိုလားအပျတဲ့ အခွားသောအရာဝထ်တုတှကေို ခန်ဓာကိုယျကနေ ဖယျရှားသှားအောငျ ကူညီပေးနိုငျလို့ပါပဲနျော …. ။
ဒီလို ခန်ဓာကိုယျထဲက အညဈအကွေးတှသောမက ဦးနှောကျထဲက ဓာတုအညဈအကွေးတှကေိုလညျး ဘယျဘကျစောငျးအိပျခွငျးဖွငျ့ ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။သငျ့ဆီမှာ နှလုံးပွသာနာရှိနမေယျဆိုရငျ ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျခွငျးက သငျ့ကိုကူညီပေးနိုငျပါတယျ …. ။
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျခွငျးက နှလုံးသှေးလညျပတျမှုကို ပိုမိုကောငျးမှနျစနေိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ရငျပူခွငျးဝဒေနာ ခံစားနရေသူတှအေနနေဲ့လညျး ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ …. ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ညာဘကျကိုစောငျးအိပျခွငျးက ဒီဝဒေနာကို ပိုမိုဆိုးရှားစနေိုငျပွီး ဘယျဘကျကို ဆယျမိနဈခနျ့လောကျ စောငျးအိပျလိုကျရုံနဲ့တငျ ရငျပူခွငျးမှ သကျသာသှားစနေိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျခွငျးက အစာခွစေနဈကိုပါ ကောငျးမှနျစနေိုငျပါတယျ။ဒီလို ကောငျးကြိုးတှေ မြားစှာရရှိစနေိုငျတဲ့ ဘယျဘကျကိုစောငျးအိပျခွငျးကို ညတိုငျးပွုလုပျကွညျ့ကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျခငျဗြာ ……. ။
လူတှအေတှကျ အိပျစကျတာက အရေးပါတဲ့ အားသှငျးမှုဖွဈတယျ။ သငျအိပျတဲ့ အနအေထားက သငျ့အထှထှေကေနျြးမာရေးကို သကျရောကျမှုရှိတယျ ဆိုတာ သငျသိပါသလား။ လတျတလောလလေ့ာမှုအရ ခန်ဓာကိုယျကို ဘယျဘကျစောငျးအိပျတာကွောငျ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးအမြားစုရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစတေယျလို့ သိရပါတယျ။
– ပွနျရညျကွောစနဈ လုပျငနျးဆောငျတာကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ
ပွနျရညျကွောစနဈဟာ ကိုယျတှငျးစနဈကနေ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှနေဲ့ အဆိပျအတောကျတှေ စှနျ့ထုတျတဲ့ နညျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အရေးပါတဲ့လုပျငနျးဆောငျတာကိုလုပျပါတယျ။ ပွနျရညျကွောစနဈထဲက အကွီးဆုံး သှေးကွောက ခန်ဓာကိုယျဘယျဘကျအခွမျးမှာရှိတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာ ကိုယျကို ဘယျဘကျစောငျးအိပျတာက ခန်ဓာကိုယျကနေ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကေို ပိုပွီး ထိထိရောကျရောကျ စှနျ့ ထုတျနိုငျပါတယျ။ ပွနျရညျကွောစနဈက အဆီ၊ ပရိုတငျးဓာတျနဲ့ တဈသြှူးထဲက တခွားအရေးကွီးတဲ့ အရာတှေ သယျယူပို့ဆောငျရာမှာအရေးပါပွီး ဆဲလျတှထေဲကို အာဟာရဓာတျတှေ မွနျမွနျရောကျရှိစပေါတယျ။
– သရကျရှကျကို ကောငျးကောငျးလုပျဆောငျစနေိုငျပါတယျ
သရကျရှကျဟာ ပွနျရညျကွောစနဈထဲကအကွီးဆုံးအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးဖွဈပွီး ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဘယျဘကျ အခွမျးမှာရှိပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကို ဘယျဘကျစောငျး အိပျတဲ့အခါ သရကျရှကျက ပိုပွီးထိထိရောကျရောကျ အလုပျလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ သရကျရှကျထဲသှေးစီး ဆငျးမှုအားကောငျးစပွေီး စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကေို ပိုပွီး မွနျမွနျ စှနျ့ထုတျပေးနိုငျပါတယျ။
– စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကေို ကောငျးကောငျး စှနျ့ထုတျနိုငျပါတယျ
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးမှာ အူသိမျနဲ့အူမကွီးကွားဆကျတဲ့နရော (Ileocecal valve)ရှိပါတယျ။ ဘယျဘကျစောငျးအိပျတဲ့အခါ ကမ်ဘာမွဆှေဲအားကွောငျ့ အူသိမျကနေ အူမကွီးဆီကို စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှေ အလှယျ တကူထှကျရှိသှားပါတော့တယျ။ အဲဒီအခါ အူမကွီးကနေ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကေို မွနျမွနျစှနျ့ထုတျနိုငျစပေါတယျ။
– ညဘကျရငျပူဝဒေနာ လြော့ပါးစပေါတယျ
– အသညျး ဝနျပိမှုမဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ
– နှလုံးကို ကနျြးမာစပေါတယျ